Jowhar.com : Somali Leader News - News: Soomaaliya iyo Ururka Caalamiga ah ee Shaqada (ILO) ee Q.M oo heshiis kala saxiixday.(Sawirro)
April 24 2014 01:25:50
Soomaaliya iyo Ururka Caalamiga ah ee Shaqada (ILO) ee Q.M oo heshiis kala saxiixday.(Sawirro)
Dawladda Soomaaliya iyo Ururka Caalamiga ah ee Shaqada (ILO) ee hoos-taga Qaramada Midoobay, loona yaqaano International Labour Organisation ayaa maanta magaalada Geneva ee dalka Switzerland ku kala saxiixday heshiis caalami ah oo la xiriira kor-u-qaadida shaqada iyo xuquuqda shaqaalaha iyadoo heshiiskan uu Soomaaliya u saxiixay Ra�iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Cabdiweli Sheekh Axmed, halka Ururka Caalamiga ah ee ILO uu u saxiixay Mudane Aeneas Chapinga Chuma oo ah madaxa Ururka ee qaaradda Afrika.
Heshiiskan labada dhinac oo ka dhacay xarunta ILO ee Qaramada Midoobay ee magaalada Geneva ayaa waxaa ahmiyadiisu ay tahay in shaqo-abuur loo sameeyo dhalinyarada Soomaaliyeed , lana hormariyo ganacsiga waaweyn iyo midka yar yar ee ka jira dalka Soomaaliya. Heshiiskan ayaa danta laga leeyahay ay tahay sidii kor loogu qaadi lahaa tayada shaqada iyo xuquuqda shaqaalaha si ay u sahlanaato in la dhaqan galiyo barnaamijka Hiigsiga Cusub ee Soomaaliya ee loo yaqaano New Deal. Ra'ķisul Wasaaraha Soomaaliya oo lagu martiqaaday shirka Ururka Caalamiga ah ee ILO ayaa looga hadlay horumarinta shaqada ee dalalka kasoo kabanaya dhibaatooyinka iyadoo dawladda Soomaaliya iyo Ururka Caalamiga ah ee ILO ay markii ugu horaysay kala saxiixdeen heshiis ka kooban sadex qodob oo kala ah:
1- Xorriyadda Ururada Shaqaalaha iyo kulamada ay isugu yimaadaan.
2- Xuquuq-siinta qofka shaqaalaha ah.
3- La-dagaalanka caruurta lagu shaqeeyo ama la shaqaalaysiiyo.
Ururkan ILO waxaa uu ka caawinayaa Soomaaliya dhanka tababarada iyo fulinta heshiiskan ka dhacay Geneva oo ah mid lagu xoojinayo tayayada shaqada iyo xuquuqda shaqaalaha, taasi oo micneheedu yahay in ay qayb weyn ka qaadanayso amaanka iyo xasiloonida dalka Soomaaliya.
� Heshiiska ay dawladdu la gashay Ururka Caalamiga ah ee Shaqada ee ILO oo hoos yimaada Q.M waxaa uu u gogol-xaarayaa in aan buuxinno shuruudaha shaqada ee laga doonayo Soomaaliya si ay ugu sahlanaato dadka iyo sharikadaha maalgashiga in ay qayb ka qaataan dhaqaalaha dalka, waa in uu qofku yeesho xuquuq isla markaana uu ka shaqeeyo shaqo la aqbali karo. Soomaaliya waxaa muddo ka jirtay in lagu tunto xuquuqda uu leeyahay qofka shaqaalaha ah. Heshiiskan waxaa uu noo sahlayaa in caalamku ay noo aqoonsadaan dal laga shaqayn karo isla markaana ay ka jirto xuquuqda shaqaalaha.� Ayuu yiri Ra�iisul Wasaaraha soomaaliya Mudane Cabdiweli Sheekh Axmed.
Sidoo kale Ra�iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa kudbad uu ka jeediyay shirkii maanta ee Ururka ILO waxaa uu uga hadlay sida ay dawladdiisu uga goįntahay dib-u-soo noolaynta dhaqaalaha dalka, abuurista shaqada iyo dib-u-dhiska kaabayaasha dhaqaalaha dalka Soomaaliya isagoo dhanka kalana ka warbixiyay xaaladda Soomaaliya iyo siyaasadda dawladdiisa ee ku aadan xuquuqda uu leeyahay qof kasta oo muwaadin ah si ay arintaasi uga qayb qaadato xasiloonida dalka.
Waxaa sidoo kale Ra�iisul Wasaaruhu uu kulan gaar ah oo qado sharaf ah uu la qaatay madaxa Ururka ILO , Mudane Guy Ryder iyagoo kawada hadlay xoojinta xiriirka labada dhinac iyo taageerada kala duwan ee Soomaaliya ay u baahantahay in loo fidiyo.
hanad on March 21 2014
0 Comments · 2088 Reads
Jowhar.com738,087 unique visits